Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A October 2010 (7)
Q and A October 2010 (7)
1. ကြည့်ရတာ တော်တော်ပိန်တယ်
2. စအိုကွဲနာ လက္ခဏာအတိုင်း
3. ချောင်းဆိုးနေတာ ၅ လလောက်တောင်ရှိပြီ
4. ရေယုံလို အနာမျိုးဟာ
Q: အခု ဝမ်းသွားရင် လုံးဝသွေးမပါတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် (Glyvenol 400 = Tribenosidum 400mg) ဆေးကို ဘယ်လောက် ကြာကြာ ဆက်သောက်သင့်ပါသလဲ။ သွေးမကျတော့ဘဲ ဆက်သောက်ရင်ကော ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။ နောက်ထပ် ရောဂါတစ်ခု အူကျတယ် ထင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ဆရာဝန်တစ်ယောက် ဒီကိုလာတုန်းက သူ့ကို ပြကြည့်ပါတယ်။ သွေးကြော ကျတာလို့ ပြောပါတယ်။ ခွဲမှပျောက်ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ နေပူတဲ့အခါမျိုးဆိုရင် ဥက အောက်ကို တွဲကျပြီး အထဲမှာလည်း စမ်းကြည့်တော့ အကြောလိုအရာ ဥထဲကို ရောက်နေပါတယ်။ ဘယ်ဘက် အခြမ်းမှာပါ။ ဒီရောဂါနှစ်ခု ဆက်စပ်မှု ရှိနေပါသလား။ တစ်ခါတစ်ခါဆိုရင် ဘောကလည်း အောင့်ပါတယ်။ အခုတော့ ဘောင်းဘီဝတ်ပြီး ဆင်ခြင်နေပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ရော ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ။
A: ပြောတဲ့ဆေး သက်သာရင် နားထားနိုင်ပါတယ်။ လိပ်ခေါင်းက ဆေးသောက်တာနဲ့ ပျောက်တာ မဟုတ်လို့ပါ။
Q and A Hernia အူကျခြင်း အမေး-အဖြေ နဲ့
Epididymitis and Orchitis ကျား အစေ့-အကြောရောင်ခြင်းတွေ ဖတ်စေချင်ပါသည်။
Q: ကျနော့် အသက်က ၃၁ နှစ်။ လူနာတစ်ဦး ရေးထားတဲ့ စအိုကွဲနာ လက္ခဏာအတိုင်း ဖြစ်နေပါတယ်။ အရင်ကတော့ ဝမ်းချုပ်ရင် ဝမ်းသွားရခက်တယ်။ သွေးနည်းနည်းပါတယ်။ ၃ နှစ်လောက် ရှိပါပြီ။ ဖြစ်လိုက် ပျောက်လိုက် ဖြစ်နေတာပါ။ အခုတော့ ဝမ်းသွားတိုင်း သွေးပါပြီး၊ နာကျင်မှုခံစားရတာ ၁ လ ကျော်ရှိပါပြီ။ အရင်ကလိုပဲ ပျောက်မယ် ထင်ပြီး နေတာရယ်၊ (့) နိုင်ငံမှာ ပညာသင်ဖို့ ရောက်နေတာရယ်ကြောင့် ဆေးခန်းပြဖို့ ဘာသာစကား အခက်အခဲ ရှိပါတယ်။ ဆေးဝယ် သောက်ပါတယ်။ (Glyvenol 400 mg) ဖြစ်ပါတယ်။ သောက်တဲ့ နေ့ကနေစပြီး သွေးကတော့ မပါတော့ပါဘူး။ လေးရက်လောက်ကြာလာတော့ ဝမ်းသွားတာ ခက်ခဲမှု အရင်လို ပြန်ဖြစ်ချင်လာပါတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရရင် ကောင်းမလဲ။ ဒီနိုင်ငံမှာလည်း မခွဲချင်ဘူး။ အဲဒီဆေးရော ဆက်သောက်ရင် ပျောက်နိုင်သလား။ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး ဘာဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။ အစာအိမ်ရောင် ရောဂါလည်း ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ ဒီမှာ ၂ နှစ်၊ ၃ နှစ်လောက် နေရမှာ။ အဲဒီအချိန်အတွင်းမှာ ဒီအတိုင်း ဆေးသောက်ပြီး နေလို့ရော ရောဂါဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်သလဲ။
A: Glyvenol 400 = Tribenosidum 400mg ဆေးက စားဆေး၊ ထည့်ဆေး ရှိတယ်။ လိပ်ခေါင်း၊ သွေးကြောထုံး ရောဂါတွေ အတွက်သုံးတယ်။ စားဆေးကို တနေ့ ၂ ကြိမ်သောက်ရတယ်။ Procto-Glyvenol က လိမ်းဆေးဖြစ်တယ်။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး ထူးမဆိုးပါ။ လိမ်းဆေးက လိမ်းစမှာ ပူလောင်တာ ခံစားရတယ်။
လိပ်ခေါင်း၊ ဘရင်ဂျီနာ၊ စအိုကွဲနာတွေကို ကုတာ ဆေးတခုထဲ မရပါ။ တခုစီသပ်သပ် ရေးထားပြီးသား ရှိပါတယ်။ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင် ဂရုစိုက်ပါ။ ရောဂါအဆင့်အလိုက်လဲ ဆေးကုရတာကွာ သေးပါတယ်။
Q: ကျမအသက်၂၂ နဲ့ ၂၃ ကြားမှာပါ။ အိမ်ထောင်ကျတာ ၁ဝ လ လောက်ရှိပါပြီ။ အိမ်ထောင် မကျမီက ကိုယ် အလေးချိန် ကီလို ၄၉ လောက်ရှိတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီး နောက်ပိုင်း ၄၄ လောက်ပဲ ရှိတော့တယ်။ ကျမ အရပ်က ၁၆၂ လောက် ရှိတယ်။ ကြည့်ရတာ တော်တော်ပိန်တယ်။ အဲဒါ ကိုယ်ဝန်တားဆေးနဲ့ ပတ်သတ်မူရှိ မရှိသိချင်လို့ပါ။ ကျမ အိမ်ထောင် ကျကတည်းက သုံးတဲ့ဆေးက Mercilon 28 လုံးကဒ်ပါဆရာ။ ကျမနဲ့ မတည့်လို့ ပိန်တာများလား။ ကျမ ကီလိုကို ၅ဝ ကျော်လောက် ဖြစ်ချင်တယ်။ တစ်ချို့ တားဆေးတွေက တည့်ရင်ဝတယ်လို့ ကြားတယ်။ ပိန်တာဟာ တားဆေးနဲ့ မဆိုင်ရင်လည်း ဝလာအောင် ဘယ်လို အားဆေးမျိုး သုံးစွဲရမလဲ။ ကေသီပန်သုံးစွဲရင်ရော ဝနိုင်ပါသလားဆရာ။
A: Mercilon ဆေးက (Ethinylestradiol and Desogestrel) ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲ တားဆေးပါ။ ဘယ်တားဆေးမဆို သောက်တဲ့သူတွေ မတူတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထင်ရင် ဆေးနာမယ်တမျိုး ပြောင်းသင့် ပြောင်းနိုင်တယ်။ တပ်အပ်သေခြာ ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါ။
အလေးချိန် ကျစေတဲ့ တခြားအကြောင်းခံတွေ ရှာသင့်တယ်။ အရင်ဆုံး ရေးပြီးသား စာတပုဒ်ကို ဖတ်ပါအုံး။
How to gain weight လှယုံမက ဝချင်သေးရင်
အကြံပေးချင်တာက ဝစေတဲ့ ဆရာဝန်မညွှန်တဲ့ အရပ်ပြောဆေးတွေ မသုံးပါနဲ့။ တိရစ္ဆာန်တွေ သုံးတဲ့ဆေးတွေ သောက်နေကြတာ တွေ့ရတယ်။ အရမ်းကာရော ဝပါလေရော။ မြန်မာဆေးတွေအစွမ်း ပညာသယ်လို မသိပါ။
15 Oct 10, 16:46
Q: ကျနော်က ချောင်းဆိုးနေတာ ၅ လလောက်တောင်ရှိပြီ။ အခု (့) မှာ အလုပ် လုပ်နေတာပါ။ ဒီက ဆရာဝန်တွေ ကတော့ ဘာရောဂါမှ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ ရိုးရိုး အအေးမိလို့ ချောင်းဆိုးတာလို့ပဲ ပြောတယ်။ ဓာတ်မှန် ရိုက် ကြည့်တော့လည်း ဘာမှ မထူးခြားဘူးတဲ့။ သလိပ်ကိုတော့ မစစ်ကြဘူး။ ချောင်းဆိုးတာကလည်း အချိန်တိုင်း ဆိုးနေတာ မဟုတ်ဘူး။ အလုပ် ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်တဲ့အခါ ဖြစ်ဖြစ်။ အရမ်း အေးတဲ့အခါတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ချွဲသလိပ်ကော ပြည့်ကြပ် လာပြီးတော့ အရမ်းမောတယ်။ သလိပ်ထဲမှာလည်း သွေးတော့ မပါဘူး။ သလိပ်ကတော့ တခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ သလိပ်မျိုးပဲ။ အခဲလိုက် အခဲလိုက် ထွက်လာတယ်။ ဘာရောဂါ ဖြစ်နိုင်သလဲ။ ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
A: ချွဲသလိပ်ကော ပြည့်ကြပ်တယ်၊ မောတယ်၊ သလိပ်က အခဲလိုက် အခဲလိုက် ထွက်တယ်ဆိုရင် တခုခုတော့ ဖြစ်နေတာပါ။ ဆရာဝန်လဲ ပြထားလို့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ တခုခုဆိုတာ ဗိုင်းရပ်စ် ဒါမှမဟုတ် ဗက်တီးရီးယား ဝင်တာ ဖြစ်နေမယ်။ (အလာဂျီ) ကနေတဆင့် ဆက်လာတာမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။ ချွဲသလိပ်ထွက်စေတဲ့ Expectorant ချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေး သောက်နိုင်တယ်။ Cold သက်သာဆေး တခုခုသောက်ပါ။ အိပ်ချင်စေတာများလို့ အားချိန်မှာ သောက်ပါ။ သလိပ် အရောင် ရှိရင် Ampicillin/Amoxacillin တခုခု 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ဒါမှမဟုတ် 250 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်၊ စုစုပေါင်း ၄-၅ ရက် သောက်ပါ။ မြန်မာ ကွမ်းရွက်ပုံ လျှက်ဆားလဲ အသုံးကျနိုင်ပါတယ်။ မနက်စောစော (ဂျင်း) ချင်း ပြုတ်ရည် သောက်နိုင်တယ်။
Q: ပါးစပ်အနားတဝိုက်မှာ ပေါက်တဲ့ ရေယုံလို အနာမျိုးဟာ ဘာကြောင့် ဖြစ်တယ်ဘာ၊ ဆေးလိမ်းရမယ်ဆိုတာ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါ။
A: ရေယုံသေခြာလား။ ရေယုံက နာမယ်၊ ဖြစ်တာ မကြာဘူး။ အဖုလေးတွေ ရှိမယ်။ ဗိုင်းရပ်စ် ကနေဖြစ်တာပါ။
Acyclovir, Famciclovir, Valacyclovir တခုခု သောက်နိုင်တယ်။ Penciclovir andacyclovir လိမ်းနိုင်တယ်။ ၂ မျိုးလုံး ဈေးကြီးတယ်၊ ရှားတယ်။ ရှာမရရင် Chloramphenicol/Tetracycline မျက်စဉ်း တခုခု လိမ်းနိုင်တယ်။ ဘာမှ မလုပ်လဲ ၁ ပါတ်မကြာ ပျောက်မှာပါ။ ပြန်ပေါ်တတ်တယ်။ ဖြစ်ဖြစ်ချင်း လက်နဲ့ ဖိထားပေးရတယ်။